सर्वत्र चर्चामा रहेको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई )आखिर के हो ? किन प्रयोग गर्ने ?
नेपाल लगायत विश्व भरिनै कोरोनाको संक्रमणले समस्या निम्त्याएको छ । मानिस लकडाउनका कारण घरभित्रै रहेका छन् । काृेरोना भाइरसबाट बच्न सबैले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पीपीई सामाग्री प्रयोग गर्न आवश्यक रहन्छ ।
कोरोना भाइरस स्वास प्रस्वास प्रक्रियासमा हावाबाट मानव देखि मानवमा सर्ने भएको हुदाँ यसबाट बच्न सबैले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पन्जा, बुट, बडी सुट र भाईजर लगायतका सामाग्री प्रयोग गर्न आवश्यक रहन्छ ।यिनिहरु सामानहरु नै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पी पी इ) हुन्। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पी पी इ ) स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बन्धीत नागरिकले प्रयोग गरेका छन । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर्योग गर्दैमा जोखिम सुन्य हुन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त हुन सकिदैन ।यसको लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ्।
सामान्य अर्थमा बुझ्दा पीपीई ले मानव शरिरलाई चोट वा संक्रमणबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको सुरक्षात्मक कपडा, हेलमेट, गग्गल्स, पन्जा अन्य कपडा वा उपकरणलाई व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण भनिन्छ।
यस्ता सुरक्षा उपकरणहरूले भौतिक चोट पटक, विद्युतीय चोट पटक, तातो चिसो, जोखिम पूर्ण रसायन, जैविक जोखिम, र वायुजनित कणपदार्थ बाट हुने खतरालाइ न्युनिकरण गर्दछ।
धेरै देशमा सुरक्षा उपकरण विभिन्न रोजगार सम्बन्धी व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उद्देश्यका साथै खेलकुद र अन्य मनोरन्जन गतिविधिहरूमा लगाउन गरिएको छ ।
सुरक्षात्मक कपडाू परम्परागत कपडाको कोट पर्दछ भने सुरक्षात्मक सामाग्रीमा प्याड, गार्डहरू, शिल्ड वा मास्क र अन्य यस्तै चीजहरू पर्दछन। पीपीई सूट विभिन्न सफाइमा व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि प्रयोग हुने सूट अथवा कोरोना जस्तो महामारीमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने सुट हुन्।
विभिन्न जोखिमबाट बच्न व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई प्रयोग गरिन्छ। डाक्टर, नर्स, विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मीले विभिन्न प्रयोगशालामा काम गर्दादेखि धातु र काठको काम गर्ने व्यक्ति र अन्तरिक्ष यात्री आदिले समेत यसको प्रयोग गर्दछन।
कोरोना भाइरस एक मानिसबाट अर्कोमा सर्ने भएकाले अग्र भागमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ ।रोगको संक्रमणबाट बच्न पीपीईको गुणस्तर, प्रयोग विधि, उद्देश्य, आकार प्रकारले जोखिम न्युनिकरण गर्ने नगर्ने कुरामा ठुलो भुमिका खेल्दछ् ।
फरक क्षेत्रमा कार्य गर्ने सुरक्षाको लागि यसको प्रयोग भएको छ सोहि अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण फरक फरक प्रकारको हुन्छ । यिनिहरुमा छालाको सुरक्षा गर्ने,आखाँको सुरक्षा गर्ने,ध्बनिबाट कानको सुरक्षा गर्ने, स्वासप्रस्वासमा धुलोबाट बचाउने आदि हुन्। उद्धेश्य अनुसार कुनै एक वा सवै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पेशाजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा विज्ञान अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण९पी पी इ ०को प्रयोग अन्तिम विकल्प रुपमा रहेको छ । यस भन्दा अगाडी पहिलो विकल्प जोखिमको उन्मुलन , दोश्रो विकल्प जोखिमलाई प्रतिस्थापन, तेस्रो विकल्प इञ्जिनियरिङ्ग विधिबाट जोखिमको रोकथाम,चौथो विकल्प प्रशासनिक विधि अपनाएर जोखिमको रोकथाम गर्नुनै हो ।
यसरी पाचौ अथवा अन्तिम विकल्प जोखिमको व्यवस्थापनको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को प्रयोग हो।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को प्रयोग गर्नु परे सर्वप्रथम उद्देश्य र कामको प्रकृति अनुरुप उचित एवं गुणस्तरीय छन् कि छैनन् भनि प्रमाणित गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात गुणस्तरिय कार्यविधि अनुसार पहिरनु पर्दछ। पहिरिसकेको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई ठीक छ भनि सुपरभिजन हुनु अनिवार्य रहेको छ । त्यस्तैगरी पीपीई उतार्दा पनि कार्यविधि अनुसार उतार्ने र उक्त कार्य ठिकसंग गरेको प्रमाणित गर्नु पर्दछ ।
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरूको उद्देश्य कामदारहरूलाई हुने विभिन्न जोखिमलाई कम गर्नु हो। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को प्रयोग अन्तिम विकल्प हो र जहाँ खतराहरू छन् त्यहाँ पीपीई आवश्यक पदर्छ ।
पी पी इ का सबै राम्रा मात्र होइन नराम्रा पक्ष पनि छ्न । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण९पी पी इ ०को कुनै पनि वस्तु पहिरन र प्रयोगकर्ता र काम गर्ने वातावरण माझ बाधा सृजना गर्ने सम्भाबना रहन्छ । यसलाई लगाउदा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। तिनीहरूको प्रयोगले कार्य गर्न गाह्रो हुन सक्छ त्यसैले यसले कुनै पनि पीपीई सही रूपमा प्रयोग गर्न लगाउनेलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
पीपीईलाई राम्रो तथा एर्गोनोमिक डिजाइन गर्दा यस्ता बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ र त्यसैले पीपीईको सही प्रयोगको माध्यमबाट सुरक्षित र स्वस्थ कार्य अवस्था सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। कामको प्रकृति अनुरुप जोखिकरहित कार्य सम्पादनका लागि पीपीईको उचित रुपमा प्रयोग गरौं ।
लेखक नेपाल सरकारका उप सचिव हुनुहुन्छ ।